Mkpụrụ Akwụkwọ Mkpọ Mkpọ (Mushrooms, Akwukwo nri, Agwa)
Mkpọ Akwukwo nri (Mushrooms, akwukwo nri, agwa)
Kpoo ma kpoo ọkụ site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ, yabụ uzuoku na mmiri dị jụụ agaghị emerụ ngwaahịa ahụ, ọ dịghịkwa ọgwụ kemịkalụ mmiri dị mkpa. A na-efesa mmiri mmiri na ngwaahịa ahụ site na mmiri mgbapụta na nozzles ndị e kesara na nlọghachi iji nweta nzube nke ịgba ụlọ. Ezigbo okpomọkụ na njikwa nrụgide nwere ike ịdị mma maka ngwaahịa dịgasị iche iche.
Kpoo ma kpoo ọkụ site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ, yabụ uzuoku na mmiri dị jụụ agaghị emerụ ngwaahịa ahụ, ọ dịghịkwa ọgwụ kemịkalụ mmiri dị mkpa. Usoro mmiri a na-agbanye n’okwukwe site n’elu ruo na ala site na mgbapụta mmiri buru ibu na nnukwu efere mmiri nke dị n’elu retort ahụ iji mezuo nzube nke ịgba afọ. Kpọmkwem okpomọkụ na mgbali akara nwere ike ịbụ adabara a dịgasị iche iche nke packaged ngwaahịa. Characteristicsdị njirimara ndị dị mfe ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na-eme ka nzacha ọgwụ DTS na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ihe ọverageụ Chineseụ China.
Kpoo ma kpoo ọkụ site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ, yabụ uzuoku na mmiri dị jụụ agaghị emerụ ngwaahịa ahụ, ọ dịghịkwa ọgwụ kemịkalụ mmiri dị mkpa. A na-agba mmiri mmiri na ngwaahịa a site na mmiri mgbapụta na nozzles na-ekesa n'akụkụ anọ nke traktị ọ bụla iji nweta nzube nke ịgba afọ. Ọ na-ekwe nkwa ịdị n'otu nke ọnọdụ okpomọkụ n'oge ikpo ọkụ na nke jụrụ ajụ, ma dabara adaba maka ngwaahịa ndị jupụtara na akpa dị nro, ọkachasị ngwaahịa ndị nwere okpomọkụ.
Mmiri imikpu mmiri na-eji teknụzụ na-agbanwe mmiri mmiri pụrụ iche iji meziwanye ịdị n'otu nke ọnọdụ okpomọkụ n'ime arịa retort. A na-akwadebe mmiri ọkụ tupu oge eruo na mmiri mmiri ọkụ iji malite usoro ịgba afọ na oke okpomọkụ ma nweta oke ọkụ na-ebili, mgbe amịchara nwanyị, a na-emegharị mmiri na-ekpo ọkụ ma weghachite ya na mmiri ọkụ iji nweta nzube nke nchekwa nchekwa.
Usoro ntinye nwoke na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-emeri nsogbu dị iche iche na nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ ịga ụlọ ọgwụ, ma na-akwalite usoro a n'ahịa. Usoro a nwere ebe mmalite teknụzụ dị elu, teknụzụ dị elu, nsonaazụ nwoke na nwanyị na usoro dị mfe nke usoro nghazi mgbe ịme ụlọ gachara. Ọ nwere ike ịchọta ihe achọrọ maka nhazi na nrụpụta na-aga n'ihu.
Site na ịgbakwunye onye na-akwado ya na ndabere nke nsị mmiri, onye na-ekpo ọkụ na nri a na-ekpo ọkụ na-adị na kọntaktị na mmanye mmanye, na ikuku ikuku na sterilizer. Enwere ike ịchịkwa nrụgide n'adabereghị na ọnọdụ okpomọkụ. Onye nwere sterilizer nwere ike ịtọ ọtụtụ usoro dịka ngwaahịa dị iche iche nke nchịkọta dị iche iche.
Mmiri ịgba mmiri na-agba mmiri na-agba mmiri na-eji ntụgharị nke ahụ na-agbagharị iji mee ka ọdịnaya dị na ngwugwu. Kpoo ma kpoo ọkụ site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ, yabụ uzuoku na mmiri dị jụụ agaghị emerụ ngwaahịa ahụ, ọ dịghịkwa ọgwụ kemịkalụ mmiri dị mkpa. A na-efesa mmiri mmiri na ngwaahịa ahụ site na mmiri mgbapụta na nozzles ndị e kesara na nlọghachi iji nweta nzube nke ịgba ụlọ. Ezigbo okpomọkụ na njikwa nrụgide nwere ike ịdị mma maka ngwaahịa dịgasị iche iche.
Steam na rotary retort bụ iji ntụgharị nke ahụ na-agbagharị iji mee ka ọdịnaya dị na ngwugwu. Ọ bụ ihe dị n'ime usoro a ka ikuku niile wee si na retort site na idei mmiri ahụ na uzuoku ma kwe ka ikuku gbapụ site na valvụ ikuku. arịa n'oge ọ bụla n'oge usoro ịgba afọ ọ bụla. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe nrụgide ikuku na-etinye n'ọrụ n'oge usoro jụrụ iji gbochie nrụrụ akpa.
Saturated Steam Retort bụ usoro kacha ochie nke mmadụ jiri mee nwa na nwoke. Maka tin nwere ike ịgba nwoke, ọ bụ ụdịrị usoro dị mfe ma nwee ntụkwasị obi. Ọ bụ ihe dị n'ime usoro a ka ikuku niile wee si na retort site na idei mmiri ahụ na uzuoku ma kwe ka ikuku gbapụ site na valvụ ikuku. arịa n'oge ọ bụla n'oge usoro ịgba afọ ọ bụla. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe nrụgide ikuku na-etinye n'ọrụ n'oge usoro jụrụ iji gbochie nrụrụ akpa.
Omume na nhazi nri bụ ịhapụ obere ụgbọ mmiri na-aga na shells buru ibu iji melite arụmọrụ na nchekwa ngwaahịa. Nnukwu ụgbọ mmiri na-egosi nkata buru ibu nke na-enweghị ike iji aka aka. Nkata buru ibu buru ibu ma dịkwa arọ nke na otu onye agaghị agagharị.